(ကထိက ဒေါ်မြင့်သန်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မြန်မာစာပေ ပညာရှင် ဆရာမကြီး ကထိက ဒေါ်မြင့်သန်း ကို သူဌေး ဦးကြင်သိန်း၊ ဒေါ်မမကြီးတို့က ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၌ ဖွားမြင်သည်။ အမည်ရင်း ဒေါ်မြင့်သန်း ဖြစ်သည်။ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး စာပေ နှင့် မြန်မာ စာပေ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုး ရေးတို့တွင် ထူးခြားပြောင်မြောက်စွာ ဆောင်ရွက် ခဲ့သော မြန်မာစာပေ ပညာရှင် ဆရာမကြီးဖြစ်သည်။ ၂၀ ရာစု မြန်မာစာပေ သမိုင်းတွင် လွန်စွာ ထင်ရှားသည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ပညာရေးလောက၊ စာပေလောက၊ မြန်မာစာပေလောကတွင် လွန်စွာထင်ရှားသူဆရာမကြီးဖြစ်သော်လည်း မာနမကြီးပေ။ လူတိုင်းကို ယဉ်ကျေးပျူငြာစွာ ဆက်ဆံတတ်သည်။ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာကောင်းကျိုးအတွက် အတက်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ အလှူဒါန ရက်ရောသည်။ ဒေါ်မြင့်သန်း၏ ဖခင် သူဌေး ဦးကြင်သိန်းသည် ၁၉၃၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၇ရက် မှ ၁၉၃၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၁၂ရက်အထိ ပထမအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ လန်ဒန် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး (The Round Table Conference) သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ် ၂၄ ဦး နှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုကွန်ဖရင့်သို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဦးဘဘေ၊ ဦးချစ်လှိုင်၊ အမ်အေ ဦးမောင်ကြီး၊ ဒေါ်မြစိန် (ဒိုင်အာခီခေတ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးမေအောင် ၏သမီး)၊ သာယာဝတီ ဦးပု တို့နှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့တွင် ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် Ramsay MacDonald စသော အင်္ဂလိပ် အစိုးရအား မြန်မာ့အရေး (demanding Burma's administration from India) တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဒေါ်မြင့်သန်း၏ အစ်မမှာ ဒေါက်တာ ဒေါ်စန်းလွင်ဖြစ်သည်။
မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး စာပေ နှင့် မြန်မာ စာပေ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုး ရေးတို့တွင် ထူးခြားပြောင်မြောက်စွာ ဆောင်ရွက် ခဲ့သော မြန်မာစာပေ ပညာရှင် ဆရာမကြီး
၁ ပညာသင်ကြားခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းခြင်း
ပညာသင်ကြားခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းခြင်းပြင်ဆင်
၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့မြို့မ အထက်တန်းကျောင်း တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး မြို့မ အမျိုးသမီး အထက်တန်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တတ်ရောက်နေစဉ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်လာသဖြင့် ပညာသင်ပျက်ခဲ့ရသည်။ စစ်ကြီးအပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် အရေးပေါ် တက္ကသိုလ်သို့ (E.U.C.) နှင့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်သို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာဝိဇ္ဇာ ဂုဏ်ထူးတန်း (ပထမတန်း) (First Class) ဖြင့် အောင်သည်။ ထိုနှစ်၌ပင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် အချိန်ပြည့် နည်းပြအဖြစ် အမှုထမ်းသည်။ နောက်တနှစ် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် လက်ထောက် ကထိက ဖြစ်သည်။ မဟာဝိဇ္ဇာ ဂုဏ်ထူးတန်းကို ဂုဏ်ထူးအမှတ် (Distination) ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ မော်လမြိုင်ကောလိပ်သို့ လက်ထောက် ကထိက အဖြစ်ဖြင့်ပင် တာဝန် ပြောင်းရွှေ့ ထမ်းဆောင်ရပြီး၊ ရန်ကုန် ဆေးသိပ္ပံ (၂)၊ မင်္ဂလာဒုံသို့ လည်းကောင်း၊ ပညာရေး တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)၊ ပုသိမ် ကောလိပ်သို့ လည်းကောင်း၊ ကထိက ဌာနမှူး အဖြစ် တာဝန် ပြောင်းရွှေ့ ထမ်းဆောင်ရသည်။ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၈၅ ခုတွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်သို့ ကထိက အဖြစ် ပြန်လည် ရောက်ရှိပြီး ၁၉၈၅ တွင် သက်ပြည့် အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။
စာပေရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကထိက ဒေါ်မြင့်သန်း၏ ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ ၁၉၄၄၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း 'စာရေးဆရာအသင်း' ဝင်ခဲ့သည်။ ဆရာဇဝန၊ ဆရာသင်္ခါတို့ ဦးဆောင်သော စာရေးဆရာ စာစောင်တွင် စာညွန့်၊ ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။ စစ်ပြီးစ ၁၉၄၅ တွင် ရွှေမန်းစာဆို၊ ယုဝတီဂျာနယ်၊ သံတော်ဆင့် သတင်းစာ၌ ထောင်ကဲအော်သံ အခန်းဖွင့်၍ လွတ်လပ်ရေး မရမီနှင့် ရလုဆဲဆဲ အချိန်အထိ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။ အချို့သော တက္ကသိုလ် မဂ္ဂဇင်းများတွင် မြန်မာစာ စာတည်းမှူးနှင့် သုတေသန စာတမ်းရှင်၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာရှင် အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ယခုအခါ မြို့မကျောင်းမဂ္ဂဇင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်း၊ ငွေတာရီ၊ မြဝတီ၊ လစဉ်ထုတ်ဂျာနယ်များ နှင့် သတင်းစာများတွင် ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊အမျိုးသားရေး နှင့် ကျောင်းသား လူငယ်ရေးရာ ဆောင်းပါးများ ရေးသားလျက် ရှိသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် မြို့မကျောင်း၏ ၇၅နှစ်ပြည့် စိန်ရတု ကို အထက ၂ ဒဂုံ၊ အထက ၃ ဒဂုံ တွင် ကျင်းပခဲ့ရာတွင် ဗိုလ်ချုပ် သောင်းတင်၊ ဗိုလ်ချုပ် ချစ်လှိုင်၊ ရှေ့နေချုပ် ဦးသာထွန်း၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘုန်းမြင့်၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဝင်း၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်လှ၊ ဗိုလ်ချုပ်စိန်ထွား နှင့် ဗိုလ်မှူးကြီး လှဘူး စသော မြို့မဟောင်းများနှင့်အတူ မြို့မကျောင်း စိန်ရတု နာယက အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မြို့မကျောင်းစိန်ရတု အထိမ်းအမှတ် သမိုင်းဆိုင်ရာ ပြခန်းများတွင် ဆရာမ ဒေါ်ခင်ဆွေ၊ ဆရာမ ဒေါ်ခင်သောင်းရီ၊ စာရေးဆရာ ဦးမြင့်ကြွယ် (မြို့မ-မြင့်ကြွယ်)၊ ဆရာမ ဒေါ်ခင်ခင်အေး တို့နှင့်အတူ ကြီးမှူးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၏ ၇၅နှစ်ပြည့် စိန်ရတုပွဲ ကျင်းပခဲ့ရာတွင်လည်း ဦးဆောင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ကထိက ဒေါ်မြင့်သန်း ရေးသားခဲ့သည့် စာအုပ်များ အနက် စာပေဗိမာန်မှ ထုတ်ဝေခဲ့သော 'အလှသုံးဖြာ စာပေဒသာ' (ပတွဲ၊ ဒုတွဲ) စာအုပ်သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသား စာပေဆု (လူငယ်စာပေ) ကို ရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာစာအဖွဲ့ ဦးစီးဌာနတွင် မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။
↑ မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်များ | Department of Myanmar and Language Education
↑ မြို့မ-မြင့်ကြွယ် (၂၀၀၃). မြို့မ ဆရာကြီး ဦးဘလွင် (သို့မဟုတ်) အမျိုးသားပညာရေးနိဒန်းအစ။
↑ သန်းဝင်းလှိုင် (ဧပြီ ၂၀၀၉). အကျော်ဇေယျ စာဆိုတော်များ. အားမာန်သစ် စာပေ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြင့်သန်း၊_ဒေါ်_(ကထိက)&oldid=488758" မှ ရယူရန်
၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၉:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။